वाक स्वतंत्रता हुनुपर्छ तर सीके राउतलाई समातेको ठीकै हो भन्नुको मतलब के? यसो भन्नुको अर्थ के लाग्छ? माधव नेपालले वाक स्वतंत्रता हुनुपर्छ भनेर वाक स्वतंत्रता हुने भए माधव नेपालले वाक स्वतंत्रता गायब पार्नुपर्छ भन्ने भए वाक स्वतंत्रता गायब हुनुपर्ने हो। तर हुँदैन। वाक स्वतंत्रताको सवालमा माधव नेपाल एक जना irrelevant व्यक्ति हो भन्ने कुरा त्यसैबाट प्रमाणित हुन्छ। म वाक स्वतंत्रताको पक्षमा छु तर यो दही च्युरे बाहुनले मुख नखोलेकै बेस।
नेपालमा एमाले भन्दा घटिया, racist, prejudiced अर्को कुनै राजनीतिक पार्टी छैन। एमाले भनेको पहाड़ी बाहुनहरुले नेपालको राजनीतिमा अन्तिम हुइंया गर्न जाने ठाउँ हो।
bamdev gautam ck raut federalism freedom of speech Madhav Nepal Madhes madhesi Nepal right to peaceful assembly right to self determination Terai